Fanondrahana ny voankazo sy legioma
Eo amin'ny toetry ny tontolo iainana maoderina, ny fikarakarana ny fahasalamanao dia lasa fomba fiainana. Ny sakafo mahasalama sy ny vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana dia lasa malaza kokoa. Ny fahandroana legioma ao an-tokantrano dia ahafahanao manomana ny zavatra rehetra ilainao mba hahazoana ration feno ho an'ny ririnina.
Sakamandimby vita amin'ny legioma ho an'ny voankazo sy holatra
Ho an'ny vidin'ny tsena maoderina amin'ny fitaovana an-dakozia, dia manolotra karazana legioma maitso maitso izahay. Azo zaraina araka ny fitsipiky ny vokatra amin'ny vokatra izy ireo.
Infrared metatra amin'ny legioma. Safidy io no tena manan-danja sy mampanantena androany. Ny dingana dia mifototra amin'ny hoe ny taratra amin'ny onjam-paharetana sasany dia miondrika amin'ny rano ao amin'ny vokatra, fa tsy mifangaro amin'ny vatana. Amin'ny dingana izay mandalo amin'ny 60 ° º temperatures, dia mamela ny vitamine rehetra.
Sakafom-pamokarana legioma. Antsoina hoe sublimation koa izy io. Manana dingana roa ny dingana: mangatsiaka sy maina. Ao anatin'ny fe-potoana vaksiny, amin'ny fanerena sasany, ny rano dia tsy misy afa-tsy eo amin'ny fanjakana matanjaka na gazy. Voalohany, voankazo ny vokatra rehetra ary avy eo maina (sublimated). Ity fomba ity no maoderina indrindra ary ahafahanao miaro ny fananana rehetra ao amin'ny vokatra, fa ny vidin'ny fanaingoana toy izany ho an'ny legioma sy ny voankazo dia iray amin'ireo avo indrindra.
Fiompy fanodinana ho an'ny legioma, voankazo ary holatra. Amin'ity tranga ity dia entin'ny rivotra mafana ny vokatra. Mandritra izany fotoana izany, aorian'ny fanamafisana ny fahamendrehana, misy sarimihetsika mamelatra eo ambonin'ny etona, izay misakana ny fahamainana bebe kokoa. Ary ny endrika sy ny tsiro dia miova kely.
Ahoana no hisafidianana solika ho an'ny legioma?
Ny fisafidianana ny fihinanana voankazo sy ny legioma dia ilaina ny mamantatra ny toetrany voalohany. Ny iray amin'izy ireo dia hery. Ny avo kokoa ny hery, ny haingana sy ny tsaratsara kokoa ny vokatra dia ho maina. Tsara indrindra hamakiana 350-450W.
Tandremo ny toerana misy ny fanamainana amin'ny famonoana ny voankazo sy ny legioma. Mialoha, ny rafitra ambony. Izany dia mamela ny fahantrana tsy miditra amin'ny singa-tena ary manenika ny fiainan'ny fitaovana.
Ny fahadiovana ho an'ny voankazo sy legioma dia afaka manana fahaiza-manao samihafa. Ny fahafaha-manao dia voafaritra amin'ny isa ny palettes. Amin'ny ankapobeny, io isa io dia miovaova amin'ny telo ka hatramin'ny valo. Ny fonosana maro kokoa, ny sombin-tsakafo maro ao anatin'ny fe-potoana iray azonao atao.
Ny vatana dia vita amin'ny plastika na metaly. Ny modelina plastika dia mora kokoa ary afaka mora mora foana amin'ny toerana. Raha toa ka mikasa ny hametraka ny fitaovana amin'ny andaniny sasantsasany ianao, dia afaka mividy tranga misy alikaola. Ny tsy fahampian-drizareo dia ny fahafahan'ny hafanana sy ny tsy fahampian-tsakafo. Raha ny momba ny plastika, tsara kokoa ny misafidy ny vokatra azo avy amin'ny orinasa voaporofo. Tokony ho plastika amin'ny tontolo iainana fotsiny izy io, izay tsy mihetsika amin'ny sakafo.
Tena tsara raha toa ka misy ny fiatoana sy ny fisintonana mihidy. Ny mpitrandraka arintany miaraka amin'ny famantaranandro dia miasa tsy miankina, mila mametraka ny fomba fahandro sy ny fahandro ianao. Ary ny asan'ny automatique Ny fampidinana dia mahatonga ny fitaovana ho azo antoka.
Misy ny modely amin'ny thermoregulator ary tsy misy azy io. Io famolavolana io no ahafahanao mametraka ny mari-pamantarana manokana ary manova izany mandritra ny dingana mando.
Rehefa avy nanapa-kevitra ianao hoe inona no tsara indrindra ho anao, mangetaheta izany. Saingy avy hatrany ny hahazo ny modely voafantina dia tsy maika. Ao amin'ny Internet amin'izao fotoana izao dia afaka mividy ny vokatra amin'ny vidiny ambany ianao, ary mamaky ny fanavaozana mihitsy aza. Izany fomba izany dia ahafahana mamonjy vola sy manamarina ny maha-marina ny safidiny.
Basy vita amin'ny glue ho fanaovan-jiro
Monopod ho an'ny fakan-tsary
Takelaka hazo ho an'ny fandroana
Hairstyle for graduation 2015
Fanomezana ho an'ny taona vaovao
Ahoana no haka fluoxetine ho an'ny fahazaran-doza?
Radonitsa - inona no tsy vita amin'izao andro izao?
Banitza miaraka amin'ny fofona
Salady bevohoka voahirana
Toetoetry ny atin'akoran-karazany
Ny vavony dia marary amin'ny fitondrana vohoka amin'ny voalohany
Amin'ny ahoana ny kiraroo manao akanjo fohy amin'ny lohataona?